Ushumiri Hwako Hwakaita Sedova Here? | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAustralia Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
USHUMIRI hwedu hunokosha uye hunobatsira. Asi havasi vese vatinoparidzira vanoona kukosha kwebasa redu. Kunyange vaya vanofarira kunzwa nezveBhaibheri vanogona kuona pasina chikonzero chekuti vadzidze Shoko raMwari nesu.
Izvi ndizvo zvaiita Gavin. Akatanga kupinda misangano, asi airamba kudzidza Bhaibheri. Gavin anoti: “Ndakanga ndisingazivi zvakawanda nezveBhaibheri, uye ndainyara kuti izvozvo zvizivikanwe nevamwe. Ndaitya kudzidziswa zvekunyepa uye ndaitya kuva nhengo yechitendero.” Unofungei nezvaGavin? Akanga asiri kuzobvuma kudzidza Bhaibheri here? Aiwa. Funga kuti zvinodzidziswa neBhaibheri zvinogona sei kubatsira munhu. Jehovha akaudza vanhu vake vekare kuti: “Shoko rangu richayerera sezvinoita dova, sezvinoita mvura inopfunha pauswa.” (Dheut. 31:19, 30; 32:2) Ngatimboongororai kuti ushumiri hwedu hwakafanana papi nedova toona kuti tinganyatsobatsira sei vanhu vemarudzi ose.​—1 Tim. 2:3, 4.
USHUMIRI HWAKAFANANA PAPI NEDOVA?
Dova rinodzika zvinyoronyoro. Dova rinovapo zvishoma nezvishoma richibva mutumvura tunenge turi mumhepo. Mashoko aJehovha ‘aiyerera sezvinoita dova’ nekuti paaitaura nevanhu vake, airatidza kuti aivafungawo, aiva neunyoro uye mutsa. Tinomutevedzera patinoremekedza maonero anoita vamwe zvinhu. Tinokurudzira vanhu kuti vazvionere vega kuti chokwadi ndechipi, vosarudza vega zvavanoda kuita. Patinoita izvi, zvinova nyore kuti vagamuchire mashoko edu, uye ushumiri hwedu hunobva hwanyatsobudirira.
Dova rinozorodza. Ushumiri hwedu hunozorodza vamwe kana tikatsvaka nzira dzekuvabatsira kuti varambe vachifarira chokwadi. Gavin watambotaura nezvake haana kumanikidzwa kuti abvume kudzidza Bhaibheri. Asi, imwe hama inonzi Chris iyo yakanga yambotanga kutaura naGavin yakafunga dzimwe nzira dzaizoita kuti afarire kukurukura nezveBhaibheri. Chris akatsanangurira Gavin kuti Bhaibheri rine dingindira raro uye kuriziva kwaizomubatsira kuti anyatsonzwisisa zvaidzidziswa kumisangano yaanga achipinda. Zvadaro, Chris akaudza Gavin kuti kudzidza nezveuprofita hweBhaibheri ndiko kwakamubatsira kuti azive kuti Bhaibheri rinotaura chokwadi. Izvi zvakaita kuti vazokurukura zvakati wandei nezvekuzadziswa kweuprofita. Gavin akazorodzwa nezvavakakurukura uye akazobvuma kudzidza Bhaibheri.
Dova rinoita kuti zvirimwa zvive neupenyu. KuIsrael kune mwaka unopisa uye mumwaka uyu mvura inogona kusanaya kwemwedzi yakawanda. Kudai kusingaiti dova, zvirimwa zvaizooma, zvofa. Mazuva ano kune nzara yezvekunamata, sezvakafanotaurwa naJehovha. (Amo. 8:11) Asi akavimbisawo kuti vashumiri vake vakazodzwa vaizoita “sedova rinobva kuna Jehovha,” vachiparidza mashoko eUmambo pamwe neshamwari dzavo, “mamwe makwai.” (Mika 5:7; Joh. 10:16) Tinoona mashoko akanaka eUmambo senzira yaJehovha yekuponesa upenyu here?
Dova chikomborero chinobva kuna Jehovha. (Dheut. 33:13) Ushumiri hwedu hunogona kuita kuti vaya vanoteerera vawane makomborero. Ndizvo zvakazoitika kuna Gavin. Akawana mhinduro dzemibvunzo yose yaaiva nayo kubva pakudzidza kwaakaita Bhaibheri. Munguva pfupi akafambira mberi ndokubhabhatidzwa, uye iye zvino ava kunakidzwa nekuita zvakawanda mubasa rekuparidza mashoko eUmambo pamwe chete nemudzimai wake Joyce.
Sekunyorovesa kunoita dova nyika yose, Zvapupu zvaJehovha zviri kuparidza mashoko eUmambo pasi rose
KOSHESA USHUMIRI HWAKO
Kufunga nezvedova kunotibatsirawo kuti tione kuti zvatinoita muushumiri semunhu mumwe nemumwe zvinokosha. Nei tichidaro? Donhwe rimwe chete redova harina zvakawanda zvarinoita, asi madonhwe akawanda anonyorovesa nyika yose. Saizvozvowo, munhu anogona kuona sekunge kuti basa raanoita muushumiri harisi kubatsira vakawanda. Asi patinoshanda pamwe chete sevashumiri vaJehovha tinoita kuti uchapupu husvike “kumarudzi ose.” (Mat. 24:14) Ushumiri hwedu huchaita kuti vamwe vakomborerwe naJehovha here? Huchava chikomborero kana mashoko atinoparidza achiita sedova rinodzika zvinyoronyoro, achizorodza, uye achipa upenyu.